Maxay ka dhigan tahay maalgelinta balaayada? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks maalgelinta buufin
Waa maxay maalgelinta balloon?
Xaaladda bakeeriga waxaad mar walba xusuusnaan kartaa inaad mar walba bixiso macaamil ahaan. Waxaad arki doontaa maalgelintan noocan ah hal mar. Ganacsatada baabuurta waxay siiyaan macaamiishooda qiimaha bishiiba, faa'iidada dulsaar iyo heerka ugu dambeeya, taas oo inta badan aad u qaali ah. Qiimaha xidhitaankan wayni waa barta isbedelka maalgelinta buufin, sababtoo ah halkan macaamiishu sida caadiga ah ma yaqaanaan dhab ahaan waxa dhacaya. Tixgeli maalgelinta nooc kasta ah oo aan raadsano bedelaad. maalgelinta buufin ayaa sidoo kale looma qoro sida, laakiin aad sida macaamiil ka codsanaynaa haddii aad doorato credit maalgelinta ah, run ahaantii aad is barbar iyo ilaa inta aad waa la khiyaaneeyey.
Dammiinka lacagta lagu bixiyo oo aad bixiso adigoon ogeyn
Caan ka ah deynka balloonku waa shaki la'aan. Tani ma aha in ay la sameeyaan shuruudaha wanaagsan, laakiin halkii xaqiiqda ah in shuruudaha qaarkood aysan jirin biilasha iyo macaamilka ayaa inta badan kormeeraya. Waxay ku saabsan tahay maalgelinta balloon iyo iibsashada badeecadaha macaamiisha leh qiime sare. Su'aasha koowaad inta badan waa sidee ayaan u gaari karaa yoolka, yaa raadinaya dalab kasta oo ka mid ah guriga baabuurka? Maanta waxay noqon lahayd mid aad u fudud, oo ay ugu mahadcelinayso casriga ah iyo xiriirka internetka, taasina waxay sharraxaysaa saameynta nafsadeed ee maalgelinta balloon. Wax kasta waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican, qaybaha yar ee bil kasta, lacagta hoos loo dhigo oo badanaa ku jirta qaab baabuur oo loo isticmaalo qeyb ka dibna qiimaha kama dambaysta ah, taas oo ah mustaqbalka fog ee mustaqbalka maalgelinta balloon. Tani waxay sharraxaysaa waxyaabaha keena guulaha deynka balloon. Si kastaba ha ahaatee, way fiicnaanayaan oo xisaabinayaan, sababtoo ah heerka ugu dambeeya ee amaahda bangiga ayaa la bixiyaa muddada gaaban ee deynta gaariga. Taasi waxay ka dhigeysaa qiimaha qaaliga ah, taasina waxay ka dhigeysaa maalgelinta oo dhan oo qaali ah. Sidaa darteed fiiro gaar ah u leh dhibcaha haysta qadarka ugu dambeeya ee la xirayo, taasina waa maalgelinta balloonkan. Waxaad ka heli doontaa maalgelinta noocan oo kale ah oo kaliya maaha ganacsatada baabuurta, sababtoo ah bangiyada qaarkood ayaa ku takhasusay maalgalintan. Halkan waxaa ah lacag badan oo lagu kasbado iyo gaar ahaan heerka dulsaarka hooseeya, waa inaad isticmaashaa barbardhigga oo aad isticmaasho maalgelinta balloon kaliya kiisaska gaarka ah. Lacagta rakibida deynka caadiga ah waxay u muuqataa mid qaali ah, laakiin guud ahaan waa ka raqiisan yihiin isbarbar dhigista Waxaad badbaadineysaa dhowr boqol oo euros oo leh maalgelin caadi ah iyo bangigaagu wuxuu kaa caawin doonaa baabuurka cusub raqiis ahaan. Sidoo kale ka feker qiimaha luminta iyo kuwani waa arrimaha keenaya deynka balloon si aad u isticmaala macaamiisha. Gaar ahaan waqtiyada dulsaarka hooseeya, macaamiisha badankoodu ma filayaan in ay xiraan oo aan lahayn jeeg dheeraad ah bangiga deynta.
Maalgelinta Balloon iyo go'aanka shakhsi ahaaneed
Waxaa jira deyn la leh xiritaanka sicirka sare dhamaadka mudada oo dhan oo leh dulsaarka dulsaarka, taas oo mid ka mid ah loo yaqaan 'credit ball credits'. Magacani ma aha mid rasmi ah, laakiin wuxuu ku saabsan yahay maalgelin baabuur ama deyn macmiile ah, oo loo yaqaano maalgelinta balloon ee goobo khaas ah. Qiimaha bil kasta wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan, laakiin waxay yihiin kuwo xitaa inta lagu jiro mudada, laakiin heerka ugu dambeeya waa ganacsiyada aasaasiga ah ee bangiyada ay mudan yihiin. Halkan, qaangaadhka oo dhan waa dulsaar iyo qiyaasta xaddiga xiritaanka. Waxaad bixisaa lacag ka badan ama ka badan kan caadiga ah ee kuulida marka aad doorato maalgelinta balloon. Raadi bedelaad iyo bangigaaga bangigaagu uu leeyahay heerar sare, laakiin kharashka ka yar maalgelinta balloon. Sidaa darteed, waxaad mar walba raadin kartaa beddelaad ku saabsan maalgelinta balloon. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato waa in ay tahay maalgelinta balloon.
Maqaalka horelacag deebaaji